के सूर्यले खान दिन्छ? « AayoMail
के सूर्यले खान दिन्छ?
2021,11 September, 11:08 am
‘के सूर्यले खान दिन्छ?,’ माधवकुमार नेपालले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिप्रश्न गरे,‘नयाँ पार्टीले काम गर्दै जाने हो। पार्टीको चुनाव चिह्नले खान दिने हो र?’
लक्ष्य समाजवाद बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
‘एमालेको संस्थापक हुँ म तर केपी शर्माले पार्टी कब्जा गरे।
केशरजङ्ग रायमाझिले पार्टी दरबारमा पसाएका थिए।’
‘एक्ला चलो एक्ला चलो……’
म त अक्सर सत्यको गीत एक्लै गाउँछु भन्दै माधव कुमार नेपालले अगुवा कार्यकर्ता माझ गित गुनगुनाए। उनले थपे सत्य कुरा स्थापीत हुँदै जान्छ।
आँफुसँग गीत गाउँदै सँगै हिंडेका साथिहरुले साथ छोडेको देख्दा पनि आँफु हिंडी रहेको बताउँदै एमाले प्रति कटाक्ष हान्दै माधव कुमार नेपालले भने के सूर्यले खान दिन्छ?
‘नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु ‘ भन्दै एमाले सँगको सम्बन्ध टुटीसकेको बताए। अबको लक्ष्य समाजवादको भएको भन्न समेत भ्याए।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनौति दिँदै नेपालगन्जमा आफुले गरेको भाषण स्मरण गरे। छेउमै बसेका बाँके अध्यक्ष अशोक कोईरालाले उनलाई बीचबीचमा साथ दिएका थिए।
उनले माओवादीसँग कुरा गर्न नेपालगन्ज हुँदै लखनऊ गएको सम्झना गरे । डा.धवल शम्सेर राणाको घरमा गोप्य रुपले बसेको पनि सम्झे।
सोभियत संघको ईतिहांस सम्झाउँदै सम्बोधन अघि बढाएका उनले भारतका कम्युनिष्टहरुको हविगत के भएको भनेर स्मरण गर्दै आफ्ना समर्थकहरुलाई उत्साह थप्न खोजे। पेरुको कम्युनिष्टका विषयमा पनि उनले सम्झाए । कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिन कम्युनिष्टले कोर्स बदल्न सक्नु पर्ने बताए।
चीन र भारतको झगडामा नेपालले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने तर्फ इङ्गित गर्दै कार्यकर्तालाई विदेश नीतिका बिषयमा कन्फ्युजनमा नबस्न आग्रह गरे।
कुनै ‘मिलिट्रि’ गतिविधिमा न त बिआरआई न त एमसिसि कुनै पनि सहयोग स्विकार्य नहुने कुरालाई कार्यकर्ता माझ स्पष्ट पार्न खोजे। तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एमसिसिलाई केही कन्फ्युजनलाई क्लिएर गर्न पत्राचर गरेपछी यो समस्याको जवाफले ‘क्लियर’ गरेको दाबी पनि गरे।
उनि त्यतिमै रोकिएनन नेपालले समबोधनकै क्रममा भने-‘मानिसलाई पखाला लागे पनि समयमै ओषधि गर्नुपर्छ नभए मान्छे मर्छ,त्यस्तै पार्टीमा समस्या भएकाले समस्याको समाधान समयमै गर्नुपरेको हो।’
‘यात्रा समृद्धिको,लक्ष्य समाजवादको’ यो नारा सहित युवा संघले नेपालगन्जमा प्रदेश तहको शक्ति प्रदर्शनको प्रयास गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपाल शुक्रबार नै नेपालगन्ज पुगिसकेका हुन।
उनि नेपालगन्ज पुग्दा कार्यकर्ताको लावालस्कर पहिले जस्तो त देखिएन । तर पनि नयाँ पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरु उत्साहका साथ कार्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन्।
‘पिपुल्स भोल्युन्टियर’को घोषणा गर्न नेपालगन्ज आईपुगेका हुन् । घोषणा मध्यान्नमा हुनु अघि अध्यक्ष नेपालले अगुवा नेता तथा कार्यकर्तालाई छुट्टै संबोधन गरे।
नेता नेपाललाई नेपालगन्जमा भएको युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको भेलामा युवा संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नरेश शाही, महासचिव दिपक जिएम लगायतका युवाहरुले राजनीतिक ‘ कभरअप’ गरेका दृश्य देखिन्छन। संगठनका पिबि र अन्य कमिटी घोषणाको तयारीमा संघका युवा नेताहरु ‘आन्तरिक तयारी’ गरिरहेका छन्।
कार्यक्रमको आयोजनाका विषयमा प्रदेश अध्यक्ष किशोर थापाले तयारी पुरा भएको बताएका छन् । घोषणा कार्क्रममा लुम्विनि प्रदेशका युवाहरुको सहभागिता रहेको जनाएका छन्।